Kuyini ube yiqhwa-up emfuleni ukuthi kuhamba kanjani
Ezinsukwini ubudala aseRussia ekwindla yaphela, futhi amakhaza asebusika siqala, wehlulelwa ngendlela umfula eba yiqhwa. Uyini nqabela-up, wonke umuntu wayazi - ngalesi sikhathi, lapho iqhwa umfula wayeka futhi embozwe uqweqwe obukhulu obumhlophe of bonke ubuso ichibi, kusukela ogwini kuya ogwini.
Njengoba nqabela-up iqala
Ekupheleni kwekwindla (ngokuvamile ngasekupheleni kukaMfumfu noma maphakathi no-November) Amanzi selehlile emfuleni ibe mnyama, cishe abamnyama, nasogwini, lapho kukhona isikhala kwencani, kukhona amapuleti ezondile ice. Babukeka sengathi ngephutha sabanjwa ebhange. ice okunjalo kwezinkolo kubizwa ngokuthi "zaberegi". Futhi kuba isiqiniseko uphawu - waqala izimo ezineqhwa.
Manje kungenzeka ukuba ulinde kuze iflothi umfula phezu izingcezu ezincane flat ice, ivelele ngokumelene nengemuva elimnyama lomfula. Ziyakwazi kuthi akufane nokwenzeka amafutha ajiya phezu isobho selehlile, ngoba igama labo futhi ngezinye izikhathi kuba "udaka."
Uyini nqabela-up, ukuqonda, bebona njengoba amafomu kodaka floes
Futhi lapho ngeke obukhulu iqhwa ezimanzi ishq ngeke ngisho zabaseGibithe ziphela amandla amanzi. Manje futhi uzoqhubeka ehamba nge ukugeleza, okwenza emfuleni ezindaweni ezifana noma insima obukhulu. Phela, lokhu wokudla Ubuye igama layo siqu - ". Udaka"
Amafutha ice udaka nge kancane kancane banamathelane futhi uguqulwe izigaxa friable ice, ukuba afuthwe ngesibulali amanzi. Lokhu ice Frazil - kodaka - itholakala hhayi kuphela phezu kodwa kwehlisa kukholamu amanzi uqobo, ukwakha lonke ngezinye izikhathi amatshe kanye amagoda ezimbali.
Ngemva kwezinsuku ezimbalwa futhi smerznetsya kodaka amafomu floes. Ngalesi sikhathi, ungabona drift ekwindla ice.
Kodwa lezi floes ice, ngokungafani kuya entwasahlobo, musa ancibilike futhi babe mkhulu futhi ezinkudlwana. Frost Ubamba kubo ngokuxhuma ne zaberegami. Ngalesi sikhathi nje eyeka ukuhamba eqhweni, okusho - zeqhwa phezu komfula ekugcineni kwakhiwa. River ukugeleza eyeka - ke udonsa obukhulu ice uqweqwe.
Ebandayo akwenzeki kuyo yonke imifula
Uma nqabela kuyasiza sezulu ethule nesithwathwa, iqhwa etholwe ukujiya cishe iyunifomu, futhi senyuka sisuka ogwini. Futhi uma ngesikhathi nqabela-up uwela isivunguvungu esinamandla, ingase yephuze isikhathi eside e-ezivulekile ka emifuleni emikhulu noma ezithola amachibi - amagagasi anamandla breaking ovulekile futhi athwale ice ethambile lokuqala, ekuvimbeleni ke ukuthola futhi baqine.
By endleleni, lokhu iqhwa igcine ukushayela ogwini lee, lapho, nge oqinile frost izingcezu eziyiqhwa elilula siguqulelwa okuqinile amafutha lip ukuthi kamuva oblyubuyut abadobi ngokwabo - kulungile ukudoba ebusika.
Njengoba sishilo ekuqaleni, isikhathi lapho umfula buhlangene, bezilokhu kubhekwe ekuqaleni ebusika. Kodwa kulezi zinsuku, nasemizini, ngenxa yokuthi emfuleni likhanyelwe anokungcola umkhakha efudumele, Awusoze wazi nanini ukuthi yini nqabela-up. Phela, nasemizini emfuleni noma umise Sekuhlwe kakhulu noma hhayi kwi freezer ebusika.
Ngesikhathi nqabela-imifula, kunokuba emhlabathini, lapho notshwala okusheshayo samanje ukusakaza kancane ukufinyelela noma lapho promontories ngoba ukugeleza reverse, kungenzeka ukuba agcine ukubonakala ice neqhwa lamagquma. mafomu ukuqongelela ice. Futhi ngezinye izikhathi (ikakhulukazi izingxenye enyakatho yezwe) emikhulu ingaba ngamamitha ukuphakama ngamamitha amathathu.
Uyini iqine futhi kwindlela
emifuleni kakhulu e-Russia bangabonisa ukuthi okokuqandisa ezinjalo, kodwa ngezinye izikhathi embozwe okuqinile amanzi ice ungabona izindawo lapho engekho nhlobo. Lezi zindawo zibizwa ngokuthi "amanzi evulekile" noma "Lane". Basuke kwakhiwa, noma lapho kukhona itafula amanzi afudumele, noma ezindaweni lapho umfula ugeleza khona aphume echibini, ukuthola ichibi lamanzi ukufudumala.
Ngezinye izikhathi lezi polynyas kungaba ngempela umxhwele. Ngokwesibonelo, ku-Emtsa River, ngomfula owumthelela Lake Onega, ke ayigongobali esikhaleni 100 km, naphezu kweqiniso lokuthi ubusika ezindaweni ezinzima kakhulu.
Kwakheka ezindaweni ice-free nezindawo lapho umfula has imisinga enamandla kanye ohamba uba nezimpophoma ezincane Rapids. Ngokuvamile, ezifana kungabonakala nasemkhakheni imifula Karelia futhi emifuleni entabeni eSiberia.